China HY280 intshukumo elektroniki ngokuhamba ngesantya esiphezulu enye kwebhedi umatshini ukunitha umenzi kunye Umthengisi | UAoyuan
HY280 intshukumo elektroniki ngokujika-high speed ngesantya esinye umatshini ukunitha umatshini
Le modeli isebenzisa isixhobo esihamba ngombane, i-EL）, isenza utshintsho loyilo lwelaphu ngakumbi kunye nokonga ixesha, iindleko ziya kubiza kakhulu kunaleyo yediski yemodeli okanye ikhonkco lekhonkco.
Ukuhanjiswa kwe-elektroniki, i-EBC kunye nezixhobo ezinqamlezileyo zombane (EL) zinokongezwa kumatshini ngamnye. Ingasetyenziselwa umsonto osicaba okanye umsonto we-monofilament, okanye umsonto osisicaba okanye indibaniselwano yomsonto we-monofilament, ukwenzela ukuba ulwakhiwo lomatshini luhlengahlengiswe, khetha i-shaft shaft okanye isitayile se-roller okanye olunye ulwakhiwo, ngokwesigqibo esenziwe ngelaphu somthengi, ukusebenza komatshini kakhulu zilula, zilula kwaye zifundeka lula. Umatshini une-jiko elizimeleyo, i-jiko elizimeleyo, ukubhijela i-friction yabathengi ukuba bakhethe. Imodeli nganye inokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi, inkonzo ephezulu kubathengi, ukwenzela ukuba abathengi benze iimveliso ezonelisayo, ukonga iindleko, ukuphucula amandla.
Sebenzisa isitayile esivulekileyo ngesantya esiphezulu cam ukujija-ingalo yokuxhuma-intonga indlela, ukuhamba kwe-elektroniki ukujika iteknoloji.
Isetyenziselwa ukunitha iintlobo ezahlukeneyo zomnatha wezolimo, umzekelo umnatha wokuloba ongenamaqhina, ilaphu lomnatha wefayibha, .automobile louver ikhethini, .ukhuseleko lomnatha kulwakhiwo. umnatha womnquma ,. umnatha iingcongconi, umnatha ezemidlalo kunye intambo ukunitha kwilaphu.
imodeli yomatshini Imilinganiselo (ubude * ububanzi * ubude) Ubunzima (t) umgangatho womgangatho (m2) Amandla aphambili (kW) Isantya (r / m)
HY280-130 4600 * 1800 * 2700 7 8.28 5.5-- 7.5 300-550
I-HY280-335 9820 * 1800 * 2700 9 17.68 15 300-550
Egqithileyo HY33, HYS43 multi-bar umtya ukunitha umatshini
Okulandelayo: HY289 Bundle Of Ingca Machine
HYF43 / 20,31 / 16 bar multi schlagblech Warp knitt ...